Maareynta caafimaadka Ghostwriter: Waxaan qoreynaa waraaqahaaga shaqada
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah maaraynta caafimaadka
Waxyaabaha kale, koorsadani waxay ku saabsan tahay isku dheelitirka shaqada iyo nolosha dadka. Isku dheelitirka shaqada iyo nolosha waxaa looga dan leeyahay in laga takhaluso socodka ciriiriga ah ee u dhexeeya shaqada iyo nolosha gaarka ah iyo in la suuro galiyo xiriir isku dheelitiran oo ka dhexeeya labada aag ee nolosha. Culays badan ayaa la saaraa qaab nololeedka caafimaadka leh iyo maamulka la xiriira. Maareynta ayaa sharraxaysa diiradda isuduwidda howlaha. Anshaxa ganacsiga sidoo kale door gaar ah. Iswaafajinta qoyska iyo shaqadu waa halbeeg muhiim u ah siyaasada shaqaalaha shirkadaha badan. Koorsadu waa mid ka mid ah koorsooyinka cusub oo aad u soo kordhaysa. Sida shahaado kale oo kasta, way adag tahay in lagu helo buundooyin wanaagsan shahaadadan. Imtixaanada adag ee ku jira qaybaha dhaqaalaha ma sahlana in laga gudbo. Waxaan kuu fududeyn karnaa noloshaan walaaca badan adiga iyo taada Shaqada guriga, shahaadada bachelor iyo shahaadada Masterka geeyo Waan ku taageersanahay. Waxaad sidoo kale ogaatay isku dheelitirkaaga shaqo iyo noloshaada.
Qorayaasheennu waxay si dhakhso leh u aqoonsadaan cilaaqaadka sidaas darteedna waxay keenaan tayo wanaagsan. Hadaad Fragen gacantaada ayaan ku jirnaa. Mawduucaagu waa xooggeenna. Tani waxay ku siin doontaa adiga tayada nolosha oo ka wanaagsan mar labaad. Waxaad si toos ah ugala kulmi doontaa isku dheelitirka nolosha-nolosha shaqada Qorayaashayagu waxay ku ballan qaadayaan tayada. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada. The Shaqada guriga waa inaad noo ogolaataa inaan sameyno. Xitaa adiga leh Warqad aqoon kororsi ah oder Maqalka waan ku taageersanahay. Aqoonyahan cirfiid aqoonyahan ah ayaa shaqada kuu qaban doona. Diyaarinta warqad cilmiyeed waxay u baahan tahay shaqo badan oo hordhac ah. Cilmi baarista suugaanta badanaa waa mid caajis badan mar walbana waqti badan qaadata. Hubinta khayaanada waxaa dabcan fuliya adeegeena! Ugu dambeyntiina, markaad noo shaqaaleyso qoraa ahaan, waxaad ka faa'iideysanaysaa wax kasta oo ka wanaagsan kuwa caddaaladda ah Qiimaha iyo tayada aan caadiga ahayn! Si aad awood ugu yeelatid inaad koorsada si guul leh ku dhammaysato, dhammaan qaybaha waa in dabcan la gudbiyaa. Tani aad ayey ugu adagtahay qaybo ka mid ah maadama maadooyinkan la baaray. Ku gudubka maadada noocaas ah ayaa ah tan ugu fiican ee kugu dhici karta. Laakiin waxaad u baahan tahay waqti kugu filan taas. Waan kaa caawin doonaa taas shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, shahaadada Masterka oder Qoraal. Waxaan kugu taageeri karnaa qoraallada sayniska.
Qoraalka ghost ee maaraynta caafimaadka
Kaliya nala soo xiriir hadda, tusaale ahaan adigoo phone adigana waan kuu qornaa shaqada isla markaasna ku caawin doona. Waxaan ku haynaa dhowr qoraa oo ku sugan aaggooda cilmi-baarista oo leh khibrad sannado badan ah. Qorayaashu waxay ku qori karaan waraaqo aad u wanaagsan arimahooda. Toddobaadyo gudahood maheli kartid khibrada qoraaga cirfiidka oo horey waraaqo aad u tiro badan kuqoray goobtaada.
Daraasada maamulka caafimaadka
Inta lagu guda jiro barashadaada tacliimeed ee kuliyadaha iyo jaamacadaha, imtixaano badan oo kaladuwan waa in la qoraa. Qoraalka ghost waa hal ikhtiyaar ardayda Shaqada guriga, Qoraalka PhD iyo inuu qoraa qoro qoraalkaaga. Tani waxay u oggolaaneysaa ardayda sayniska caafimaadka inay ka caawiyaan maadooyinkooda sida nidaamyada caafimaadka, dhaqaalaha caafimaadka, iyo siyaasadda caafimaadka. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno aqoontayada sayniska.
Maamulka caafimaadka nolosha mihnadeed
Cilmiga caafimaadka hada waa mowduuc caan ku ah nolosha xirfadleyda. Qorayaal khibrad leh ayaa kaa caawin doona inaad bilow fiican ku yeelato noloshaada mihnadeed intaad weli baraneyso. Qalin jabinta ka dib, waxaad ka shaqeyn kartaa isbitaalada, hay'adaha samafalka ama waaxda daryeelka caafimaadka shirkadaha.
Aagga maaraynta caafimaadka ee shirkadaha ganacsiga
Fursadahaaga oo haysta shahaado aad u wanaagsan waa kuwo ballaadhan. Shirkaduhu waxay ogaanayaan inbadan oo in shaqaalaha cusub ee mustaqbalka ay sidoo kale tixgeliyaan dhinacyada anshaxa caafimaadka marka ay dooranayaan shaqaaleeyaha mustaqbalka. Kuwani waa, iyo waxyaabo kale, fursadahaaga inaad gacan ka geysato qaabeynta ruuxaan cusub ee rajo-gelinta shirkadaha waaweyn. Suurtagalnimada kale waa iskaa-u-shaqeysiin ama cilmi-baaris dheeri ah oo ku saabsan aagga cilmi-baarista oo aad u da 'yar. Shaqada tacliimeed waa inaad u isticmaashaa wakaaladdayada 'ghostwriter'.
Hubinta tayada ee maaraynta caafimaadka